Muwaadin u Dhashay Maraykanka oo Al-shabaab-nimo Maxkamad loo soo taagayo – Radio Daljir
Muwaadin u Dhashay Maraykanka oo Al-shabaab-nimo Maxkamad loo soo taagayo
Janaayo 11, 2016 11:11 g 0
Talaado, Janaayo 12, 2016 (Daljir) —Ninkaasi oo lagu magacaabo Maalik Caalim Jones ayaa lagu soo oogay inuu u socdaalay Somalia, isla markaana uu Tababar Milliteri la soo qaatay Xarakadda Alshabaab ee Isbahaysiga la ah Ururka Alqaacida.
Maalik Caalim Jones oo horey u deganaa magaalladda Baltimore ee Gobalka Maryland ee dalka Maraykanka waxa uu Somalia u soo ambabaxay saannadkii 2011-kii, isla markaana uu noqday xubin ka tirsan Unug Khibrad leh oo u dagaalama Alshabaab.
Sarkaalad ka tirsan Waaxda Dembi-baarista Boliska Maraykanka ee FBI-da oo lagu magacaabo Mary Boese ayaa ku soo oogtay Maalik Caalim Jones dacwad ka kooban 15 bog, waxayna soo bandhigtay Labo Muuqaal Video oo laga arkay iyadoo uu Eedeysanaha uu qaadayo Dagalayahan ka tirsan Alshabaab oo lagu dilay iska horimaad ay bishii June ee sannadkii hore la galeen Ciiddanka Kenya, iyadoo dagaalkaasi Ciiddanka Kenya looga dilay 2 Askari.
Maalik Caalim Jones oo 31-jir ah ayaa lagu soo oogay 5 Fal-dembiyeed oo ay ku jiraan inuu qalab ku taageeray Alshabaab, inuu soo qaatay Tababar Milliteri, inuu bartay qaabka loogu daagalamo Qoryaha AK 47 iyo Gantaalladda Garabka laga rido.
Eedeysanaha ayaa muteysan karaa Xabsi Daa’im, haddii lagu helo Dacwadaha lagu soo oogay.
Eedeysanaha waxa uu hataan ku sugan yahay gudaha dalka Maraykanka, iyadoo bishii hore ee December 19-dii ka soo hor-muuqday Maxkamad Federal, balse haatan ayaa la shaaciyey dacwadaha lagu soo oogay.
Dhinaca kale, Ciiddanka Dowladda Federalka Somalia waxay Maalik Caalim Jones bishii December 7-dii ee sannadkii hore ku qabteen magaalladda Baraawe, xilli uu qorsheynayey inuu raaco Dooni geyn lahayd xeebaha dalka Yemen.
Markab Talyaani ah oo Bad-badiyay Tahriibayaal ay Somali ku jiraan